Bitcoin, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအချိန်ကျဆင်းမှု၏ခဏ? | Gadget သတင်း
Michael Gaton | | Cryptocurrencies
သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး cryptocurrencies ၏ဘဝနှင့်အတူပါဝငျသောအတက်အကျအားလုံးပြီးနောက်, သင့်ရဲ့ပုံမှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများပြီးသားအီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးများ၏အဘိုးပြတ်နေ့ချင်းညချင်းပြောင်းလဲသောဤအတန်ငယ်ဖရိုဖရဲအခြေအနေများမှပိုမိုအသုံးပြုဖြစ်လာကြလိမ့်မည်။
သို့သော်များစွာသောအခြားသူများအနေဖြင့်ဤလမ်းကြောင်းသည်စတင်ခြင်းမပြုရသည့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်နေဆဲပင်ဖြစ်သည် အွန်လိုင်းပွဲစားနှင့်အတူ Bitcoin ကုန်သွယ် သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းအောက်မှာ။
ထိုသူတို့ကပေါ်ပေါက်သည့်အခါဖြစ်ပါသည် BTC ၏အဘိုးပြတ်၌ဤအမျိုးအစား၏ပေါက် နှင့်အခြား cryptocurrencies, များစွာသောသူတို့ကိုသူတို့ကိုမရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်အဖြစ်ဒီမြင်နေရပ်တန့်ကြပါဘူး။ သို့သော်ဤအဖြစ်အပျက်များကိုအခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းရန်ဤမကြာသေးမီကကျဆင်းခဲ့သည့် - ယခင်ယခင်အချို့နှင့်အနည်းငယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သာလိုသည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာဘုံတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ရုံသာမကဘယ်သူ့ကိုမှနောက်ပြန်မလှည့်သင့်ဘူးဆိုတာကိုလည်းတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အချိန်ကောင်းလည်းရနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့်ဤကိစ္စကို cryptocurrencies တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်ဘယ်သောအခါမျှမရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ ဟုတ်ပါသည်၊ သတိပြုရန်၊ လေ့လာမှုများစွာပြုလုပ်ရန်နှင့်အန္တရာယ်များစွာကိုအမြဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။
အစအ ဦး ကတည်းက နောက်ကျောမေလ 2019 ခုနှစ်တွင် BTC စျေးနှုန်းပြန်လည်နာလန်ထူ Satoshi Nakamoto ၏အကြွေစေ့သည်လွန်ခဲ့သောအပတ်များကပြသခဲ့သည့်အတိုင်းယင်းသည်တန်ဖိုးနိမ့်သည်ဟုမမြင်ခဲ့ပါ။ ဘဏ္newsာရေးသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် Bloomberg သတင်းအရ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် Bitcoin ပြသခဲ့သောယူနစ်တစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ ၆၅၀၀ နှုန်းသည်၎င်း၏ထောက်ခံမှုအသစ်ဖြစ်သည် နှင့်အချို့ကျွမ်းကျင်သူများပင်စျေးနှုန်း $ 4.000 ကျဆင်းနိုင်ကြောင်းပြောဆိုထားသည်။
ဒီစာတမ်း၏အွန်လိုင်းဗားရှင်းအရကိုးကားထားသောကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရအဓိက cryptocurrency ၏တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ခြင်းအတွက်ဆုံးရှုံးမှုများသည် cryptocurrencies နှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်လိမ်လည်မှုမျိုးအပေါ်တရုတ်အာဏာပိုင်များကတိုက်ခိုက်မှု, ခိုးယူခြင်းနှင့် cryptocurrencies ၏ hacks ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခြင်းနှင့်ဤအချက်များကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်လှုံ့ဆျောသောယုံကြည်မှုမရှိခြင်း။ ထိုအသေး, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုရှိနေသော်လည်း, ဒီကနောက်ဆုံးကျဆုံးလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းစဉ်းစားရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ကောင်း, ပြန်လည်နာလန်ထူရှိလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ပြီးသားပိုပြီးကြိမ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်အဖြစ်။
ဒီဇင်ဘာလ 2019 သည်အထိ Bitcoin စျေးနှုန်းကိုးကား
Bitcoin ၏သမိုင်းဝင်အဘိုးပြတ် - သူ့လက်မှကျန်တဲ့ cryptocurrencies ၏တောင် - တောင်ထိပ်နှင့်ချိုင့်ဝှမ်းတောင်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဘာမျှမအဖြစ်ပြသ ကပိုင်ဆိုင်မှု၏ဤအမျိုးအစားအတွက်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဤအားနည်းချက်များကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Bitcoin ၏အစောပိုင်းကာလများ၌ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထိုအမည်သည် ၂၀၁၁ နွေရာသီတွင်ဤမျှလောက်မများပြားလှပေ။ ထိုအချိန်တွင်ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးကုန်ကျပြီးနောက် BTC သည်တစ်ယူနစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၂၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိသည်။ လအနည်းငယ်အကြာတစ်ဒေါ်လာ။ သို့သော်ယခုနှစ်အလှည့်အပြောင်းမတိုင်မီ၊
နောက်နွေရာသီနောက်တစ်ဖန်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်ဒေါ်လာခြောက်ထောင်အနက် Bitcoin သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလ ၁၀၀၀ နီးပါးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ နှစ်လယ်တွင်ဒေါ်လာ ၂၀၀ နီးပါးအထိကျဆင်းသွားသည်။
သို့သော်အကောင်းဆုံးမှာမလာသေးပါ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် BTC တစ်ယူနစ်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ နီးပါးကုန်ကျသည်။ ထိုနှစ်ကုန်တွင်၎င်း၏စျေးနှုန်းမှာ ၂၀၀၀၀ နီးပါးရှိသည်။ BTC ၌ရူးသွပ်မှုအချိန်စတင်ခဲ့သည်။ တစ်နှစ်အကြာတွင် 2017 အောက်သို့ကျသွားသည်။ တစ်နှစ်ခွဲဝက်အကြာမှာတော့သူက 1.000 နီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဟာချိုင့်ဝှမ်းမှာပြန်နေခဲ့တယ်။ အဆိုပါ 20.000 ၏ချိုင့်၌။
ငါတို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း Bitcoin ၏သမိုင်းတွင်မည်သည့်ချိုင့်ဝှမ်းနှင့်တောင်ထိပ်ကိုမျှမပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါ။ The စျေးနှုန်းများမမျှော်လင့်ဘဲကျဆင်းတက် နှင့်ဘယ်သူမှ, ဒါမှမဟုတ်နီးပါးဘယ်သူမှ, ကမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ချိုင့်ဝှမ်းသစ်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ အမှန်တရားကမဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆုံးမဲ့ဆက်ပြီးဆက်ကျလိမ့်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူး။
ဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူသိနိုင်တာလဲ၊ ငါတို့အခုချိုင့်ဝှမ်းမှာအနိမ့်ဆုံးဖြစ်နေတယ်။ ထိုအယခုမှစ။ ကျန်အရာအားလုံးအသစ်ကမြှင့်တင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ကျတာပေါ့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နည်းပညာ » Cryptocurrencies » Bitcoin, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအချိန်ကျဆင်းမှု၏ခဏ?
အရိုး conduction headphone များ - AfterShokz Aeropex [ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း]